Igbo, Tracts, UZI NKE 03 -- Gọzienụ Jehova, Mkpụrụ Obi M! | Waters of Life
Home -- Igbo -- Tracts -- Tract 03 (Bless the Lord, O My Soul!)
AKỤKỌ - Akwụkwọ ozi Akwụkwọ mkpirikpi maka nkesa
UZI NKE 3 - Gọzienụ Jehova, Mkpụrụ Obi M!
Ụfọdụ ndị na-arụsi ọrụ ike iji hụ na ha dị adị. Ha na-anwa inweta ego zuru oke iji bie ndụ ma na-achụ oge nile ha na mgbalị ha iji mee ka ha nwee obi ụtọ. Ma, Nwa nke Mary na-akụziri anyị, sị, "Ọ dịghị onye nwere ike ijere nna ukwu abụọ ozi; n'ihi na ma ọ ga-akpọ onye ahụ asị ma hụ onye nke ọzọ n'anya, ma ọ bụghị ya, ọ ga-eguzosi ike n'ihe nye onye ahụ ma leda onye nke ọzọ anya. Ị pụghị ijere Chineke na mamọn ozi." (Matiu 6:24).
Devid gbalịrị idozi nsogbu a site n'ife Jehova ofufe. O nyere onwe ya iwu na ihe nile di n'ime ya ka o kpuchie, ka o wee nwee ike itinye uche na Jehova nani. O kweghi ka echiche ndi ozo mekpa ya aru, ma guzo n'iru Chineke, si: "Gọzie Jehova, nkpuru obi m; na ihe niile dị n'imem, gọzie aha nsọ ya ! Gọzienu Jehova, nkpuru-obim, Echezọ-kwa-la uba-Ya nile: Onye nāb͕aghara ajọ omume-gi nile, Onye nēme ka aru-gi nile di ike, Onye nāb͕aputa ndu-Gi na ntibi-ihe, Onye kpuworo gi ebere na obi-ebere nile." (Abụ Ọma 103:1-4)
Ikpe ekpere ma na-eto eto chọrọ mkpebi siri ike na ntachi obi. Devid chọrọ ịsọpụrụ na inye Jehova otuto. Mmụọ Nsọ na-eduzi ndị kwere ekwe iji mepee onwe ha n'olu nke Onye Okike ha.
Aha ahụ bụ Jehova pụtara ugboro 6,828 isii na iri asatọ na anọ n'ime akwụkwọ Agba Ochie, ma okwu ahụ bụ Chineke pụtara nanị ugboro 2,600. Aha Chineke bu "Jehova". Aha a kwadoro ikwesị ntụkwasị obi ya. Nani ya kwesiri ntukwasi obi na ekele nile, dika Devid gosiputara.
N'agbanyeghị nke ahụ, ụda olu na echiche na-esi ike n'echiche ya, na-ajụ ido onwe ya n'okpuru. Nke a bụ ihe mere onye amụma ahụ ji nye iwu ka obi dịrị ya ọzọ iji too Jehova. O kpebiri na obi ga-ejupụta n'echiche ya na ekele na otuto. Devid choroIh n'anya Onyenwe anyI na mkp r obi ya niile na Isọpụrụ Ya na mmo ya niile. Ọ kpọrọ Jehova Onye Nsọ, onye aghụghọ ọ bụla, ma ọ bụ aghụghọ ọ bụla, ma ọ bụ mmehie ọ bụla. Onye na-abia nso Chineke ka a ga-enyocha ma tinye ya n'igwe nke ịdị nsọ Ya, nke na-ekpughe ọrụ ọ bụla na-adịghị ọcha n'ihu Ya. Devid hutara ihe ime mmuo a, wedara onwe ya ala n'iru Onye Nsọ ma nye Ya otuto. Nsọ Chineke na ekpuchi ebube Ya, n'ihi na Onye Nsọ bụ Onye Kasị Elu. Onye obula nke ichoghariri n'olu Ya gadi nso nime obi ya.
Devid ga-enye mmụọ nsọ ya iwu nke ugboro atọ ka ọ ghara ịgbachi nkịtị ma nọgide na-eto Chineke ka echiche ya wee ghara ịgbagha ma ọ bụ tụfuo ihe gbasara ego, nsogbu kwa ụbọchị na ịchekwa ihe ize ndụ. O kpebisiri ike ịṅa ntị naanị nye Onyenwe anyị Onyenwe anyị na Onyeikpe Kasị Elu nke ụwa.
Mgbe nke a gasịrị, Mmụọ Nsọ duuru Devid ka o kelee Jehova maka amara ya niile ná ndụ ya. Anyị, site na okike, n'egbughị oge chefuo ngọzi Jehova na azịza nye ekpere anyị. Anyị nile bụ ndị mmeri ụwa na-echefu ihu ọma Jehova.
Anyị na-atụ aro ka onye ọ bụla na-agụ ya, ka ị ghara ichefu uru dị iche iche dị iche iche Chineke nwere, iwepụta akwụkwọ na ide ihe niile Jehova nyere gị. Ya mere, n'ekele ya n'ezie maka ha. Toonụ Ya maka ikuku na mmiri ohuru - maka mmiri ozuzo, snow, nri na uwe - maka ndị nne na nna, ndị nkụzi, ụlọ akwụkwọ, na ebe ọrụ na ebe obibi - maka nchekwa na udo na mba gị. Kelee ya maka igbochi gị site na ọdachi ndị na-emere onwe ha nke oké ifufe, ala ọma jijiji na ugwu mgbawa. Kelee ya maka igbochi mba gị na agụụ na nsogbu nke agha. Chọọ n'ime obi gị maka ihe ndị ọzọ Jehova nyere gị. Ejila obi ike na-ekele Ya. Zụlite obi gị n'eto otuto ma na-ekele maka ihe ụfọdụ mere ị ga - eji nwee obi ụtọ n'ime obi gị, na obi ụtọ Jehova nwere ike ịdakwasị gị.
Ihe kachasị mkpa maka ekele, nke Mmụọ Nsọ si n'ike mmụọ nsọ nye Devid, bụ mgbagha nke nmehie ya niile. Ọtụtụ ndị dị ka à ga-asị na ha bụ ndị aka ha dị ọcha. Ha na-ezochi mmejọ ha ma na-agagharị na-agbagharị agbagọ. Emela ihe nlereanya ha, ma chegharịa. Na-ekwupụta mmehie gị nile nye Jehova ma kpebie na ị gaghị eme mmehie ndị a ugbu a, ka i wee nweta nkasi obi nke Jọn onyeozi gosipụtara, "Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-aghọgbu onwe anyị, eziokwu ahụ abụghịkwa n'ime anyị. Oburu na ayi kwuputa nmehie ayi, O bu onye kwesiri ntukwasi obi na onye ezi omume igbaghara ayi nmehie nile ayi na ime ka ayi di ocha‖ (1 Jon 1:8-9).
Devid nwetara amara nke Jehova, Onye gbaghaara ya mmehie ya nile. Ya mere, o nyere mkpụrụ obi ya ikelele Jehova maka mgbaghara nke Chineke na-enyekarị ya. Onye amụma ahụ hụtara na Onye Nsọ agbaghaala ma gbaghara ya mmehie ya nile. Anyị anaghị achọta amara dị otú ahụ na okpukpe ndị ọzọ. Anyị adịghị achọta okwu ndị dịka ma eleghị anya ma ọ bụ ma ọ bụ na Torah na Oziọma ahụ, n'ihi na Jehova anaghị agbaghara naanị otu akụkụ nke mmehie anyị n'emeghị ndị nke ọzọ, kama ọ na-asacha anyị kpamkpam, na-eme ka anyị dị ọcha, ma na-enye anyị amara Ya n'efu, site n'ọhụhụ Ya dị ukwuu maka anyị. Ebe ọ bụ na Kraịst, site n'ọnwụ Ya, kpuchie mmehie nke ụwa, anyị maara nke ọma na, "site n'otu onyinye O mezuewo ndị dị nsọ ruo mgbe ebighị ebi" (Ndị Hibru 10:14).
Otú ọ dị, Jehova kwuru na onye ọ bụla nke na-agbaghara mgbaghara maka mmehie ha aghaghị ịgbaghara onye iro ha, dịka Chineke gbaghaara ha (Matiu 6:12). Ị nwere onye iro? Ị na-ebi na onye ị na-ekweghị na ya? Gbaghara ya ugbu a kpamkpam, ma ọ bụghị na ị ga-atụfu mgbaghara Onyenwe anyị nke mmehie gị. Rịọ Onyenwe gị ka o nyere gị aka site n'ike Ya ka ị gbaghara onye mmegide gị ihe ọjọọ o meere gị, dịka Onye Okike si gbaghara gị (Matiu 6:14).
Mmo Nso dugharIrI Onyeam ma ah b¹ Devid ka omata na mgbe emesIrI mgbaghara niile ya, ah dIka onyinye ozo nke Onyenwe anyI nye ya. Ọ ghọtara na ya kwesịrị ikele Ya maka ya. Ugboro ole ka anyị na-arịa ọrịa, obere ọnyá ma ọ bụ ọrịa na-adịghị ala ala, ma Jehova, n'ime ebere Ya, gwọrọ anyị. Nyocha nke ndị dọkịta na ọgwụ ndị dị oké ọnụ anaghị enyere aka nanị n'ịgwọ anyị. Ebube n'ihi na ọ gaghachiri Onye Pụrụ Ime Ihe Niile. Jehova na-emesi anyị obi ike, "Mụ onwe m bụ Onye na-agwọ gị" (Ọpụpụ 15:26).
Nwa nke Meri mezuru nkwa a. Ọ gwọrọ ndị ọrịa niile bịa kwutere Ya, chụpụ mmụọ ndị na-adịghị ọcha site n'aka mmụọ ọjọọ ahụ. Ọgwụgwọ Jehova na-eji ndị dọkịta na ọgwụ na taa, mana ọgwụgwọ zuru oke sitere na Ya. Oleezi ebe ekele gi diri Ya? Echefukwala ikele Onye Okike gi na obi gi nile, n'ihi na O bu onye nyere gi mmasi nke ahuike na ogwugwu.
Eze Devid bụ nwoke na-atụ egwu Chineke. Ọ maara na e nwere ụbọchị na-abịa mgbe ọ ga-eche Onyenwe ya, n'ihi ya, ọ kwadebere maka ọnwụ ya. N'agbanyeghị nke ahụ, Onyenwe anyị kpughere ya na Ya ga-agbapụta ya n'ili ya, ọ bụghị n'ezi omume ya, kama n'ihi na o kweere na Ya na-eme ka Onyenwe anyị dị mma. Onye ọ bụla tụkwasịrị Kraịst obi ekwesịghị ịtụ egwu ọnwụ maọbụ ahụhụ nke ili ahụ, dịka Ọkpara nke Mary kwadoro anyị, "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere na m, ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịnwụ, ọ ga-adị ndụ. Onye ọ bula nke nādi ndu, nke nēkwere kwa na Mu, ọ gaghi-anwu ma-ọli. Ì kwere nke a?" (Jọn 11:25-26).
Nwa nke Mery bilitere n'ili Ya mgbe O meriri ọnwụ. O meriri Setan ma gosiputa eziokwu nke ndu ebighebi ya. Ọ ga-enyere ndị niile na-eso Ya aka, were ha n'aka ma soro ha gafee n'ọnụ ụzọ ọnwụ gaa ndụ ebighi ebi.
Mmụọ nke Jehova gwara Eze Devid na okpueze ọlaedo na diamond abụghị ihe kachasị ọnụ ahịa n'ụwa. E nwere okpueze Jehova nke na-enwu ruo mgbe ebighị ebi. Onye natara ebere nke Onyenwe anyi ma nye ya ndi ogbenye na ndi ozo n'enye ndi mmadu nsogbu, izute ndi ozo na ndi ozo, na inyere ha aka n'ezie, Jehova ga-enye ya okpueze ime mmuo. Ùnu natara okpueze nke ebere na ọmịiko site n'aka Onye-nwe-unu na-enyefe ya nye ndị ohu Ya ebere? Obi gị ọ dị ka nkume? Ma ọ bụ na ọ gbazee ka ị na-ata ahụhụ na ahụhụ na-akwa ákwá na-akwa ákwá? Kraịst na-eduzi gị ka ị nọgide na-eme ebere, ọ bụghị naanị n'etiti ndị agbata obi gị na ndị enyi gị, kamakwa n'etiti ndị na-akpafu, na n'etiti ndị na-ekweghị ekwe bụ ndị na-enweghị olileanya na ndụ a na nke ọzọ. Gbanyere ha ma ghara iju gi anya mgbe ị na-ahụ iru ihu ha, ma kpee ekpere maka ha wee chee banyere ha ka Jehova wee zipụ gị ka i jiri ikwesị ntụkwasị obi na ezi obi na-ejere ha ozi.
E nwere ndị na-amaghị ama na ndị dị mfe n'obi na okpueze a na-adịghị ahụ anya na isi ha. Ha mere ebere nye ndị nọ n'ahụhụ na ndị ogbenye, kpee ekpere maka ha, nyere ha aka ma chụọrọ ha àjà, n'otu ụzọ ahụ Onyenwe ha mere maka ha. O kwuputara, "Nwa nke madu abiaghi ijere ya ozi, kama ijere ya ozi, na inye ndu Ya ka oburu ihe mgbaputa maka otutu madu" (Matiu 20:28). Kraist bu uzo na ihe omuma ayi nke nyere ayi ike na obi ike iji obi uto jeere Ya ozi.
Ezigbo onye na-agụ,
Ị na-achọ ego na ogo dị elu, nke na-eme ka obi gị maa jijiji? Ma nke Kra ist gbanwere obi gi ka i wee nwee obi ebere ma nwee obi ebere, Mụọ Abụ Ọma nke 103. Zụzie onwe gị iji nwee obi ekele ka i wee mata, n'ime Kraịst, ịhụnanya nke mmadụ nke Chineke nke na-agbanwe gị n'ime ebere Ya. Jiri obi ekele na otuto too onwe gị!
Anyị dị njikere iziga gị, n'ekpere n'ekpere, Oziọma Kraịst na ekpere na ntụgharị uche. Ha nwere ike inyere gị aka ito na inye ekele site na obi gị dum.
Gbaa ndi ozo ume ito ma jeere Jehova ozi: oburu na ichoro akwukwo akwukwo a, enyela ya ndi ozo, ka ha wee nwee ike ibu ndi ohu nke Jehova. Dee anyị akwụkwọ na anyị ga-ezite gị ụfọdụ akwụkwọ akwụkwọ ndị a ka ị kesaa.
Ichere akwụkwọ ozi gị, anyị na-ekpe ekpere maka gị ma gwa gị ka ị cheta anyị n'ekpere gị. Echefukwala ide ederede zuru ezu gị.
Page last modified on October 01, 2018, at 02:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)